बेइजिङ उड्न यसपटक पनि ओलीले किन रोजे हिमालय एयरलाइन्स नै ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
बेइजिङ उड्न यसपटक पनि ओलीले किन रोजे हिमालय एयरलाइन्स नै ?
प्रकाशित मिति: ३१ जेष्ठ २०७५, बिहीबार June 14, 2018
काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार ५ देखि गर्ने जनवादी गणतन्त्र चीनकाे भ्रमणमा राष्ट्रिय ध्वजाबहाक नेपाल एयरलाइन्सकाे जहाज प्रयाेग नगर्ने भएका छन्। तिब्बत एयरलाइन्स र आङ छिरिङ शेर्पा संयुक्त लगानीकाे हिमालय एयरलाइन्सबाट प्रधानमन्त्री अाेली चीन जाने निश्चित भएकाे हाे।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘भारत जाँदा हामीले नेपाल एयरलाइन्स प्रयोग गरेका थियौं, अब चीन जाँदा हिमालय एयरलाइन्स प्रयोग हुन्छ।’ नेपाली निजी लगानीकर्तालाई प्रवर्द्धन गर्दा अन्यथा लिनु नहुने उनकाे भनाइ थियाे। हिमालयकाे जहाज पैसा तिरेर प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणमा प्रयाेग गर्ने उनले जानकारी दिए।
अाेलीले सन् २०१६ मा चीनकाे भ्रमण गर्दा पनि राष्ट्रिय ध्वजाबहाक नेपाल एयरलाइन्स प्रयाेग गरेका थिएनन्। त्यतिबेला पनि उनी हिमालयकै जहाजबाट चीन गएका थिए। एक सय ५८ सिट क्षमताको एयरबस ए३२० विमान प्रधानमन्त्री सहितको ५६ सदस्यीय टोली लिएर ७ चैत २०७२ को साँझ बेइजिङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लंदा चीनले ठूलो सम्मान दिएको थियो ओलीलाई। बेइजिङबाट पश्चिम चीनको चेङ्दु हुँदै प्रधानमन्त्रीलाई घुमाएर सात दिनपछि हिमालय एयरलाइन्स काठमाडौं फर्केको थियो।
काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाईलाई उर्दुत गर्ने हो भने फलामे ढोका फोरेर नेकपाका ७७ […]
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा नेपाल) ले आगामी २८, २९ र ३० कातिकमा एकता महाधिवेशन गर्ने […]
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले पार्टीभित्र एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्ने, नङ्ग्याउने र […]
बालुवाटारभित्रको सरकारी जग्गा अझै पनि व्यक्तिको नाममा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको जग्गा कांग्रेस संस्थापक नेता सुवर्णशमशेर राणाका […]
सीमा क्षेत्रमा यसरी हुन्छ नुनदेखि सुनसम्म तस्करी सेटिङ
काठमाडौं । सीमा क्षेत्रमा सशस्त्रको टोली सक्रिय नहुँदा तस्करी बढेको छ। भन्सार कर्मचारी रमिते बनेपछि […]
नेकपा एकीकरण : ५३ नेतालाई दोहोरो जिम्मेवारी
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का ७७ जिल्ला अध्यक्ष र सचिव बनाइएका १५४ नेतामध्ये ५३ जनाले दोहोरो […]